Iga Raali Noqo Qalbi - Diblomaasi
Iga Raali Noqo Qalbi
Qofwalbo oo adduunkaan kunool wuxuu jecelyahay innuu helo qofkii noloshadiisa ama nolosheeda farxad gelini lahaa. Hal maalin kuma timaado farxada uu qofwalbo raadinaayo. Waxay u baahantahay in loo maro juhdi dheer. Sidda aan la wada socono duniddaan waxaa ugu nasiib badan qofkii helo lamaane oo aay aad isku jecelyihiin, oo aad isku ixtiramaan, isku naxariistaan iyo waliba marwalbo oo qalad dhaca in la iska raali geliyo.
Qofka aad nolosha la qeybsanayso inaad raali gelin siiso wey fiicantahay wali aad iyo aad. Marwalbo oo qalad kaa dhaca waxaa wanaagsan inaad qirato qaladkaaga. Waligaa iska illaali inaad isla weyni ku dhaqanto ama aad tiraahdo “aniga ma ihi shaqsi geli karo qaladka noocaan oo kale”. Ma qaldama waa Eebe S.W.C, adiguse waxaa wanaagsan inaad ogaato inaad tahay shaqsi bini’aadam ah oo aad qalad geli karto.
Waxaa jira dhibaatooyin badan oo dhexmara qoysaska Soomaaliyeed laakiin ma ahan dhibaatooyin ku eg Soomaalida oo kali ee waa dhibaatooyin ay ka wada simanyihiin bulshooyinka caalamka oo dhan. Haddii aad taqaano dad aanan Soomaali ahayn iskuday inaad booqato guryahooda iyo qaababka ay u noolyihiin, markaad mudo saaxiib la noqoto waxaad oganaysaa in marwalbo bulshooyinka ay ku kala duwanyihiin dhaqan ahaan, raashin ahaan, diin ahaan iyo waliba waxwalbo oo la xariira hababka kala duwan ee nolosha bulshooyinka. Aniga Cabduljabaar ahaan aqqoon badan uma lihi qaababka ay u noolyihiin bulshooyinka caalamka balse waxaan waxyar ka ogaaday in farqi weyn u dhaxeeyo dhammaan dadkii ajaanibta ahaa ee aan bartay. Hadaba waxaa isweydiin mudan anaga madamaa aan nahay Soomaali maxaan kaga duwanahay bulshooyinka kale ee caalamka?
“Dabcan waxaan kaga duwanaani karnaa dhaqan, diin iyo waliba hab-dhaqanka kale ee quseeyo nolosha aadanaha waliba midda maalin walbo lalla kulmo…..”
Haddii aad tahay shaqsi leh lamaane sidda qof inka dhaxeeyo xariir lamaane sidda lamaane isqabo iyo kuwa raba inay mustaqbal wada qeybsadaan sanadaha soo socda. Lamanayaashaasi waxay u wada baahanyihiin marwalbo raaligelin iyo xasilooni. Hadaba su’aasha isweydiinta mudan ayaa ah siddee lagu gaari karaa xasilooni iyo raaligelin? Dabcan waxwalbo halmar ma wada yimaadaan, waxaan isticmaali doonaa qodobo muhiim ah oo aan isleeyahay waa muhiim in lalla yimaado haddii ay noqoto dhinaca lamanaha iyo nolol wada qeybsiga. Si aad ugu guulaysato nolosha qoyska aad aabaha u tahay ama aad hooyada u tahay waxaad u baahantahay inaad raacdo qodobadaan.
• Haddii aad doonayso inaad ku noolaato xasilooni iyo raaligelin waxaad u baahantahay marka horre qofka aad nolosha la qeybsanayso si fiican ugu fiirso. Maxaa yeelay waa qofka aad doonayso inaad daryeesho, iyadana ku daryeesho waliba si dhaqan wanaagsan ay ku jirto, iyo waliba gaarida hadafka noloshaada. Waxaa jira dad badan oo iskuugu jira rag iyo dumarba waxay inta badan lamanahooda ku xushaan qurux iyo in uu hanti leeyahay iwm. Laakiin xaqiiqda jirta ayaa ah lamaanaha waxaa lagu xushaa dadnimo, diin iyo waliba aqlaaq wanaagsan. Xulista lamaanaha wanaagsan waxay ku xerantahay sidda aad adiga tahay. Ma waxaad tahay shaqsi xirfadle ah, ma waxaad tahay shaqsi la socdo dad wanaagsan, ma waxaad tahay aqqoonyahaan bulshada hawl wanaagsan u haayo. Xaggee laguugu tirayaa. Dabcan haddii aad u baahantahay inaad nolosha la qeybsato qof wanaagsan, marka horre waxaad u baahantahay inaad adiga wanaagsanaato.
• Marwalbo xasuusnoow gurigaaga sidda aad doonayso uma dhisnaani karo sawabtoo ah waxaa iska jira caqabado adduun. Waxwalbo waxaa loo baahanyahay in dulqaad la sameeyo sawabtoo ah dulqaadka waa waxyaabaha muhiimka u ah qoyskaaga inaad kula dhaqanto. Waxaa macquul ah inaad tahay shaqsi dulqaad badan leh hadana aan u suurta geli karin sidda uu ka rabo nolosha. Qiimaha ugu weyn ee dulqaadka uu leeyahay ayaa ah in gurigaaga noqdo mid kuu dhisan haddii rabo ha noqdo mid booq lagu dhexnoolyahay. Laakiin adiga haddii aad tahay shaqsi rabo innuu saameyn ku yeesho nolosha aadanaha marwalbo waxaad u baahantahay nolol degan iyo lamaane aad la tashani karto.
• Lamanahaagga ka dhigo qof aad la tashato marwalbo si ay u hesho kalsooni fiican. La tashiga waa waxyaabaha ay ku wanaagsanyihiin rag badan oo Soomaaliyeed, waana sawabaha Soomaalida dumarkooda u dhalaan caruur badan. Qorshaha iyo siyaasada qoyska u yaallo marwalbo waa muhiim maxaa yeelay qorsho iyo istirateji la’aan qoys ah meel dheer ma gaaro.
• Waxaa laga maarmaan ah inaad raali gelin ka bixiso qaladka aad gasho marwalbo. Inaad qaladkaaga qirato waa muhiim. Waligaa iska illaali inaad noqoto qof isla weyn, qofka isla weyn hadafka ma gaaro. Marwalbo iskuday inaad ku dadaasho qirashada qaladkaaga. Masuuliyadda kaa saaran inaad qaladkaaga qirato waa in beri ka maalin marka qofka kale galo qalad iyadana ama asigana qirto.
Maqaalkaan aan ugu magacdaray ”Iga Raali Noqo” ula jeedka aan ka leeyahay ayaa ah inaan barano Iga raali noqo. Waxaa jira lamaano yaal badan oo aan inta badan aqqoonin iga raali noqo sawabtana waa jaahilnimo jirta darteeda. Maxaa yeelay qofka nolosha kaaga dhaw aadanaha intiisa kale raaligelin wanaagsan inaad siiso dantaada ayaa ku jirta ee ku dadaal inaad barato raaligelinta. Waxaan jeclahay in maqaalkaani laga barani karo qiimaha ay leedahay raaligelinta, waxaana aaminsanahay in waxyaabo badan oo aan ka tagay inay jiraan balse haddii aad ogtahay waxyaabahaasi aan ka tagay waa wax lagu farxo. Waxaan kula dardaamayaa inaad ku dadaasho inaad noqoto qof qaladkiisa qirta. Laakiin ha noqonin qof qaladkiisa badanyahay ee ku dadaal in qaladkaaga yareyso marwalbo.
Related Topics:Iga Raali Noqo Qalbi
Abdikhadar Abdillahi Abukar
Waxaan kamid ahay ragga rabaa in ay noqdaan QORAA magaceygu waa Cabdikhadar Cabdillahi Abukar waxan jooga kismayo sidoo kale waxan aad u daneenayaa in aan ka mid noqdo Bahda Tukesomalism waxaan hadda soo wadaa Buug